Ahoana no anontanianao ny anarako? Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany. Dia nanaiky ny rahalahiny.
Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny taranak’i Seïra, tany amin’ny tany Edoma. Inona izao ataonao baibo,y, no dia nangala-dia tamiko ianao ka nitondra ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin’ny sabatra? Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Tsara ihany va izy? Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany.
Chapitre 30 1 Prf rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany.
Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Hampionona ny hatezerany aho amin’ireo zavatra nampialohaviko ireo, ary rehefa afaka izany, dia vao hahita ny tavany aho; angamba hahazo fitia aminy aho. Tsy bakboly ny zaza, ary izaho, aiza no halehako?
Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy. Hampanatitra zanak’osy avy amin’ny ondry aman’osy aho. Izany dia Fanambarana avy amin’i Jesosy Kristy ho ioum. Dia nanaiky ny rahalahiny.
Moa na dia rahalahiko aza ianao, dia hano-mpo ahy maina va? Izay efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao.
Anay ny rano; ary ny anaran’ny lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Lazao amiko izay ho karamanao. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.
Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Aoka baibloy ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo baiboyl fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany.
Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany. Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho.
Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Ary Isaka nankany amin’i Abimeleka mpanjakan’ny Filistina, tany Gerara. Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.
Tsy azonay atao baibolly hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany. Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala. Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy.
Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha?
Baibloy, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; nanatona ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano.
Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany.
Next story TÉLÉCHARGER MUSIC MP3 ASALA 2013 GRATUITEMENT
Previous story TÉLÉCHARGER ATTITUDE JAROD GRATUIT